यी तीन दिदिबहिनी किन नाङ्गिए ? – SamajKhabar.com
यी तीन दिदिबहिनी किन नाङ्गिए ?
संबाददाता : Samaj Khabar प्रकाशित मिति: १५ पुष २०७४, शनिबार ०९:४३
अमेरिकी अभिनेता बु्रस विल्स र अभिनेत्री डेमी मुरका छोरीहरु रुमर, स्काउट र तलउल्हाले बाथटबमा सामूहिक न्युड तस्बिर खिचाएर हंगामा मच्चाएका छन् ।
दिदी बहिनी आफूहरु एक अर्कालाई कत्तिको साथ दिन्छन् भन्ने कुरा उनीहरुको गत साता बाहिरिएको सामूहिक नग्न तस्बिरले प्रमाण दिन्छ । नुहाउने क्रममा उनीहरुले सामूहिक रुपमा नग्न तस्बिर खिचाएको हलिउड सञ्चारमाध्यमा उल्लेख छ । मेकअप बिनाको तस्बिरमा उनीहरुले आफ्ना संवेदनशिल अंगहरुलाई घुँडा र खुम्च्याइएका खुट्टाहरुले छोपेको देख्न सकिन्छ ।
२३ वर्षे तलउल्हाले सामाजिक सञ्जालमा पोस्टेको उक्त न्युड तस्बिर केहीछिनमा भाइरलजस्तै भएर धेरैभन्दा धेरै प्रशंसकहरुबाट प्रशंसित भएको थियो ।
१५ पुष २०७४, शनिबार ०९:४३ मा प्रकाशित
राजेश हमालले को बन्छ करोडपति चलाउने